Naing BSell | Item - ဝူဟန်ကြောင့်အိမ်မှာနေလည်းအမြဲfresh ဖြစ်နေအောင်ကူညီပေးပါတရ်
Gaint Online Shop
Doctor's Best, Lutein with FloraGlo Lutein, 20 mg
QW-F09 Spraying Fan
❄️ အသားအရေ စိုပြေဖို့၊ အဆုတ်အားကောင်းဖို့၊ မိုးတွင်းလို အေးမြတဲ့အရသာမျိုး ခံစားနိုင်ဖို့ တကိုယ်ရည်သုံး ရေငွေ့ထုတ်ပန်ကာလေးပါ။
☃️ အသုံးပြုစွမ်းအင် 5V 2A,
☃️ မော်တာ စက် လည်ပတ်အား 8W,
☃️ဘတ္ထရီ သိုလှောင်နိုင်မှု 2000mAh,
☃️ အားသွင်းစနစ် 5V/0.8A,
☃️ ရေ၀င်ဆံ့ပမာဏ 200ml,
☃️ တစ်နာရီစုပ်ယူရေပမာဏ 35ml,
☃️ ပန်ကာအလေးချိန် 309g
❄️ ပန်ကာပြင်းအာား 1. 2.3ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ရေငွေ့ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ပန်ကာဖွင့်ခြင်းတို့ကို တပြိုင်နက်လုပ်နိုင်သလို တခုစီလည်း ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
❄️ ၄နာရီကြာ အားသွင်းရပြီး ၄နာရီကြာ ပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်။
❄️ အားသွင်းရင်းလည်း သုံးနိုင်သလို Power Bank နဲ့ည်း ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
❄️ တနေကုန် ၂၄နာရီပတ်လည် ဖွင့်ထားမှ 840ml မျှသာ ရေစားပါတယ်။
❄️ ညဘက် ဟောက်တတ်သူများအတွက် အဆုတ်နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ခြောက်ကပ်မနေအောင် အစိုဓါတ်ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
❄️ သွားလေရာ သယ်ဆောင်နိုင်သော အလေးချိန် ၃၀၉ဂရမ် (၂၀ကျပ်သားခန့်) သာ ရှိပါတယ်။
❄️ အောက်ခြေ ရေခွက်ထဲမှာ ရေ၂၀၀မီလီလီတာ ဆံ့ပါတယ်။ (ရေသန့်ဘူးရဲ့ ငါးပုံတပုံ)
❄️ ရေထဲမှာ ရေမွှေး၊ စပါးလင်ဆီ၊ စံပယ်ပန်း၊ နှင်းဆီပန်း၊ ခရေပန်းတို့ကို ရောထည့်ပြီး အခန်းတွင်း အေးမြလန်းဆန်းသင်းပျံ့အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။